Topi-maso ao amin’ny tontolon’ny bilaogy Libyana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Oktobra 2018 2:57 GMT
Manankarena sy marevaka ny tontolon'ny bilaogy Libyana, saingy tsy dia ara-politika. Gaga hatrany aho mikasika ny fivoarany nandritra ny telo taona. Mety vitsy ireo bilaogerany raha oharina amin'ireo firenena hafa, saingy fahagagana ny zava-misy fa mibilaogy ny olona sasany
Ny fitsidihana tamin'ity herinandro ity dia hikendry hitondra ireo bilaogera Libyana manerantany ho eo amin'ny efijerinao. Eny- tsy be pintsopintsony loatra, fa tantara mahaliana/azo antoka. Tsarovy fa araka ny nolazaiko etsy ambony, tsy manoratra momba ny politika na lohahevitra “saro-pady” ny ankamaroan'ny bilaogera Libyana. Ho hitantsika ny fomba fivoaran'izany indrindra amin’ ity vaovao mahafaly ity.
Amerikana manambady Libyana i Khadijateri, mpanoratra ao amin'ny bilaogy mitondra ny anarany. Nisarika ny saintsika izy vao haingana mikasika ny isa mampihoron-koditra amin'ny lozam-pifamoivoizan'ny fiarabe ao Libya. Mihevitra i Khadijateri fa noho ny ‘tsy fikarakarana ny arabe ara-potoana sy araka ny tokony ho izy no mahatonga izany’. Tsy mino aho fa nahare momba ny olan'ny fitondrana fiara mampidi-doza ao Libya ny olona.
Mitovy amin'izany ihany, Lebeeya ao amin'ny Lebeeya Says, nandefa momba ny vokatry ny orana tao amin'ny arabe Omani. Nanomboka tamin'ny resaka tao amin'ny zoro fanehoan-kevitra momba ny fotodrafitrasa Libyana izany izay mila jerena indray noho ny fiovaovan'ny toetr'andro sy ny tsy fahaizana miatrika izany raha sendra avy orana mihoatra ny iray andro. Tsy misy vidiny ny sarina Mercedes mihitsoka ao anaty tondra-drano.
Tamin'ny fanamarihana iray hafa, nanaparitaka ny tetikasany manokana ny bilaogy Libyana. Nifanao fanamby ireo bilaogera fa hamokatra horonantsary momba an'i Libya amin'ny fampiasana ny ‘windows movie maker (fanaovana horonantsary ao amin'ny windows)’, na rindrambaiko hafa fanitsiana lahatsary. Nanomboka tao amin'ny blaogin'i Beacon Tripoli Nights izany miaraka amin'ny angona nataony tao amin'ny ‘You Tube’ tamin'ny Ya bladi Hubik Mawali izay narahan'i A.Adam avy hatrany ao amin'ny Flying Birds ary Hanu ao amin'ny D-Log. Namoaka ‘diaporama mampihetsi-po miaraka amin'ireo sarin'ny Libyana nanomboka tamin'ny taona 1924 ka hatramin'ny taona 1930′ i Hanu.
Smokeyspice ao amin'ny The Third Space, manasongadina ny fahalianana tampoka teo amin'ireo mpanoratra Libyana satria mihevitra izy fa “misy ny harena sarobidy ara-tantara eo amin'ireo Libiana izay miandry fotoana mety na fanontaniana marina.” Tsy gaga aho taorian'ny fahombiazan'ny tantaran'i Hisham Matar. Raha niresaka momba ireo mpanoratra Libiana, namoaka ny iray amin'ireo tantarany fohy (amin'ny teny Anglisy) ilay mana-talenta, Soad ao amin'ny My Enchanting Sereeb. Miandry azy hiverina isika ary hanisy rohy na hi-scan izany ho antsika.
Trabilisia ao amin'ny Tripoli Ghibli kosa afaka nahita biografia fohy an'ny raibeny, dokotera Libiana malaza tamin'ny taona 1920. Tena ilaina ny mamaky izany satria mampiseho topi-maso izany hoe fiainana tao amin'ny ampira Ottoman izay tao anatiny i Libya hatramin'ny fiandohan'ny taonjato faha-20 ny tantarany.
Ho famintinana, manandrana ny fifandraisana sy maneho ny heviny amin'ny mpihaino marobe ireo bilaogera Libyana. Marobe ireo lohahevitra tiana resahana, saingy antenaiko fa nanintona anao ity fanandramana ity.